Ngathi - Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd.
Shandong LanDian Biological Technology Co., LTD. ibekwe kwipaki yezobuchwephesha obuphezulu e-shouguang, kwiphondo le-shandong, elikunxweme olusemazantsi e-bohai laizhou Bay kwaye "yidolophu yokuloba, ityuwa kunye nemifuno". Inkampani kuphela kwamashishini obuchwephesha abathenga itekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi wesikolo saseTshayina sezenzululwazi ukuvelisa i-asidi esekwe kwi-bio esekwe kukuvumba kwezinto eziphilayo kunye nokuvelisa iplastiki esekwe kwi-PBS efumaneka kwizinto eziphilayo esebenzisa i-asidi ye-succinic njengempahla eluhlaza.
Inkampani igubungela indawo ye-1500 mu kunye nesilinganiselo sokuyilwa kweprojekthi ngama-500,000 eetoni / ngonyaka we-bio-based succinic acid kunye ne-200,000 yeetoni / ngonyaka we-bio-based PBS yeplastiki ebolayo, kunye notyalo-mali olupheleleyo lwe-5 billion yuan kunye nolwakhiwo ngezigaba ezithathu. Inqanaba lokuqala lityale i-yuan eyi-1 yezigidigidi kunye nesikali sokwakha ziitoni ezili-120,000 / ngonyaka we-bio-based succinic acid kunye neetoni ezingama-50 / ngonyaka ngemveliso esekwe kwi-PBS ye-bio. Iitoni zokuqala ezingama-60,000 / umgca wemveliso wesigaba sokuqala wagqitywa wafakwa kwimveliso ngoSeptemba 2017. I-bio-based succinic acid ikumgangatho obalaseleyo kwaye yamkelwe ngokubanzi ngabasebenzisi.
Inkampani yomelele kuphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji kwaye iimveliso zayo zidweliswe kwiprojekthi ephambili yesizwe "863". Yeyona workstation academician kunye workstation postdoctoral le Akhademi Chinese of Sciences, kunye neshishini phambili Weifang bio-ezisekelwe isiseko esitsha izinto kwinqanaba lesizwe. Ngokusebenzisana neyunivesithi yaseTsinghua, iziko lophando lwe-Tianjin biotechnology le-Chinese academy yesayensi, inkampani iseke ilebhu ye-microbiology, elebhu yeebhayoloji zebhayoloji, iiplastiki ezinokuthotywa zePBS kunye neemveliso zazo ezilungisiweyo zophando kunye nophando lwelebhu. Yakha i-asidi ye-bio esekwe kwi-bio esekwe kwi-bio esekwe kunye nesiseko se-PBS esekwe kwi-bio ngokusebenzisa itekhnoloji yokuvundisa yebhayoloji.
01 Izibonelelo zeMveliso
I-Bio-based succinic acid kunye neemveliso ze-bio-based based sodium succinate, zonke iimveliso ezenziwe ngendlela ye-biological fermentation, ziya kuba kukhuphiswano olomeleleyo lokutshintsha iinkqubo ze-petrochemical production kwixa elizayo; I-bio-based 1,4 butanediol yahlukile kwiimveliso eziveliswa ziindlela zamachiza. Iimveliso ezisekwe kwi-bio, ezisebenzisa i-bio-based butanediol inokuvelisa i-PBAT esekwe kwi-bio kunye nezinye iimveliso, ezinokukhuthaza ukukhuthazwa kwe-PBAT esekwe kwi-bio kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Iimveliso zothotho lwe-PBS ezisekwe kwi-Bio zinezibonelelo ezibonakalayo kwiipropathi zoomatshini kunye nokusebenza ngokuwohloka, kwaye imveliso ekrwada yinkampani ye-bio-based succinic acid yenkampani, ke umxholo we-bio-khabhoni uhambelana ngokupheleleyo nemigangatho yaseYurophu naseMelika.
02 Uncedo lweNtengiso
Ukuveliswa kwe-asidi ye-succinic ngendlela ye-biological fermentation akuchaphazeli ixabiso le-petroleum, ixabiso lezinto ezingazinzanga ixesha elide, kwaye ixabiso lemveliso liphantsi kunelo leekhemikhali. Okwangoku, izinto ezonakeleyo ze-PBS, i-PBST kunye ne-PBSA zichaphazeleka lixabiso eliphezulu lemarike ye-asidi ye-succinic kwinqanaba lokuqala, okukhokelela kwiindleko eziphezulu zemveliso kunye nokuthintela ukukhuthazwa kunye nokusetyenziswa kothotho lwe-PBS. Njengoko i-bio esekwe kwi-bio-based succinic acid kunye ne-bio-based 1,4-butanediol ibekwa kwintengiso ngamanani amakhulu, inyanzelekile ukuba ikhuthaze ukusetyenziswa kwezinto ezisekwe kwi-bio-based biodegradable PBS series kunye ne-PBAT kwiimalike zasekhaya nakwamanye amazwe.
03 Izibonelelo zobugcisa
Itekhnoloji yenkcenkceshela yenkampani yethu isombulule imeko eqhelekileyo yeeasidi ezahlukeneyo kunye neemveliso kwinkqubo yokubila ngophando oluqhubekayo kunye nophuhliso kunye nokuphucula inkqubo yemveliso kule minyaka idlulileyo. Ixabiso lemveliso liye lancitshiswa ngokuqhubekekayo kwaye umgangatho wemveliso uye waphuculwa ngokuqhubekekayo.
04 Uncedo lolawulo
Inkampani ineqela eligqibeleleyo, elisebenzayo, elikhawulezayo kunye neqela lolawulo. Inkampani inenzuzo epheleleyo kwishishini ngokubhekisele kwizixhobo zekhompyuter. Ngabasebenzi abakumgangatho ophezulu, kunye nefilosofi yeshishini yokuqhubela phambili namaxesha, inkampani yethu iya kuba nezinto eziluncedo kolu shishino. Isenzo.
Umzi-mveliso oBlue, Khokela imeko yehlabathi
Itekhnoloji itshintsha imeko-bume
Ejolise kwintengiso, iimfuno ezitsha
Ukuphucula ilizwe, kunceda uluntu
I-teknoloji kuqala, ukuveliswa kwemveliso
Umaleko ngumaleko, umgangatho kuqala
Yakha iphupha lakho, thwala uxanduva lwakho
Qiniseka kwaye uzimisele
Luhlaza kunye notshintsho
Inkampani yamkela itekhnoloji entsha yokuvundiswa kwezinto zebhayoloji, eziluhlaza, ezingenangcoliseko kwaye ezingenabungozi kwizinto ezisetyenzisiweyo, inkqubo yokuvelisa ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo. Ukomeleza ukhuselo lokusingqongileyo kuzwelonke, kubalulekile ukwandisa iiplastiki ezinokuboliswa ziintsholongwane ezisilwa nongcoliseko olumhlophe. I-acid esekwe kwi-bio esekwe yinkampani kuphela kwento eluhlaza ekwenziweni kwePBS yeplastiki ebolayo. Ayinakubekwa endaweni kunye nethemba lebhodi.